भगवान श्रीकृष्णको मृत्यु कसरी भयो ? यस्ताे छ महाभारतकाे युद्ध पछिकाे राेचक कहानी - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
भगवान श्रीकृष्णको मृत्यु कसरी भयो ? यस्ताे छ महाभारतकाे युद्ध पछिकाे राेचक कहानी
२०७७ भाद्र १२, शुक्रबार २०:१५:००
हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ श्रीकृष्णको जन्म कसरी भयो । तर के तपाईंलाई थाहा छ भगवान श्रीकृष्णको मृत्यु कसरी भयो ? उनकाे दाहसंस्कार कस्ले गर्याे ? यी प्रश्नहरूकाे उत्तर जान्न तपाई उत्सुक हुनुहुन्छ ? यदी हुनुहुन्छ भने वर्णन मिडियाले तपाईंलाई बताउँनेछ भगवान कृष्णको मृत्यु कसरी भयो ?
भगवान कृष्णको जन्म ईसापूर्व ३११२ मा भएकाे विश्वास गरिन्छ । श्री कृष्णको जन्म मथुरामा भएको थियो । तर उनको बाल्यकाल गोकुल, वृन्दावन, नन्दगाउँ, बरसाना र द्वारका लगायतका ठाउँमा बित्यो ।
महाभारतकाे युद्ध पछि भगवान श्री कृष्णले ३६ बर्ष द्वारकामा शासन गरेकाे विश्वास गरीन्छ । त्यस पछि उनले आफ्नो शरीर त्यागिदिए अर्थात ऊनी मरे । भनिन्छ कि त्यसबेला उनी १२५ वर्षका थिए।
महाभारतको युद्ध पछि दुर्योधनको अन्त्य भयो । जसकारण उनकी आमा गन्धारी धेरै दुःखी भइन् । उनी आफ्नो छोराको मृत शरीरमा पुगेर शोक व्यक्त्त गर्न युद्धभूमिमा पुगिन् त्याहा उनका साथमा श्रीकृष्ण र पाण्डवहरू पनि थिए ।
गन्धारी आफ्ना छोराहरूको मृत्युको कारण यति दुःखी थिइन कि उनले भगवान कृष्णलाई ३६ बर्ष पछि मर्ने श्राप दिइन ।
यो सुनेर पाण्डवहरू चकित परे, तर भगवान कृष्ण अलिकती पनी विचलित भएनन् र मुस्कुराउँदै गन्धारीले दिएकाे श्रापलाई स्वीकार गरे र त्यसकाे ठीक ३६ वर्ष पछि उनकाे मृत्यु एउटा शिकारीको हातबाट भयाे ।
भागवत पुराणका अनुसार एक पटक श्री कृष्णको छोरा साम्बा जाे विचित्र थिए । उनी एक महिलाको भेषमा आफ्ना साथीहरूसँग ऋषीमुनिलाई भेट्न गए ।
महिलाको वेशमा साम्बाले ऋषीमुनिलाई आफु गर्भवती भएको बताए । जब ती यदुवंशी कुमारहरूले यसरी ऋषिमुनहरुलाई ठग्ने कोशिस गरे । ऋषीमुनिहरू क्रोधित भए र नारीमा परिणत भएको साम्बालाई श्राप दिए । ऋषीमुनिले भने तिमीले एउटा यस्ताे फलामको बाणलाई जन्म दिनेछाै जसले तिम्राे वंश र राज्यलाई नष्ट पार्नेछ ।
साम्बा ऋषिहरूको श्राप सुनेर एकदम डराए । उनले तुरुन्तै यो सबै घटना उग्रसेनलाई भने । त्यसपछि उग्रसेनले साम्बालाई तिरको पाउडर बनाएर प्रभास नदीमा प्रवाह गर्न भने,र त्यसले त्यो श्रापलाई हटाउने बताए ।
साम्बाले उग्रसेनले भनेको सबै कार्य पुरा गरे । उग्रसेनले योसँगै यादव राज्यमा कुनै पनि किसिमको नशाको उत्पादन वा वितरण नहुने आदेश जारी गरे ।
यस घटना पछि, द्वारकाका मानिसहरूले सुदर्शन चक्र, श्री कृष्णको शंख, उनको रथ र बलारामको हलो हराउँदै गरेका धेरै अशुभ संकेतहरू पाएकाे भन्ने कथन रहदै आएकाे छ । यसका साथै द्वारकामा अपराध र पापहरू पनि बढ्न थाले ।
हेर्दाहेर्दै द्वारकामा अपराध र पापको वातावरण व्याप्त थियो । यो देखेर श्रीकृष्ण साह्रै दुखीत भए । उनले आफ्ना मानिसहरूलाई आफ्ना पापहरूबाट छुटकारा पाउन यस ठाउँ छोडेर प्रभास नदीको किनारमा जान आज्ञा दिए ।
श्रीकृष्णको कुरा बुझेर तिनीहरू प्रभास नदीको किनारमा गए । तर त्यहाँ पुगेपछि सबै जना मातिए र एक अर्कासँग बहस गर्न लागे ।
यसपछि उनीहरूको बहसले लडाईको रूप लिदै गयाे । उनीहरू आपसमा झगडा गर्न थाले । यसरी सबै मानिसहरू आपसमा झगडा गरेर मारिए ।
भागवत पुराण अनुसार श्री कृष्ण भगवान एक दिन पीपलको रूखमुनि विश्राम गरिरहेका थिए । त्यसैबेला जारा नामका एक जना सिकारी सिकार खेल्दै त्याहा आएका थिए । सिकारी कृष्णलाई हिरणको आकृतीमा देखे र उनलाई टाढाबाट बाणले हाने र उनको मृत्यु भयो ।
ऋषीले कृष्णको छोरा सम्भालाई दिएको श्राप अनुसार श्रीकृष्णलाई लागेकाे तिरमा त्यही फलामको तीरको अंश थियो जुन साम्भले उग्रसेनाकाे सुझाव अनुरुप पाउडर बनाई नदीमा प्रवाह गरेका थिए । सिकारी जाराले उक्त्त फलाम माछाकाे पेटबाट निकालेर तीर बनाएका थिए ।
यस प्रकारले सबै यदुवंशीहरू पनि ऋषीको श्राप अनुसार नष्ट भए र गन्धारीको श्रापका अनुसार, महाभारतको युद्धपछी श्री कृष्णको ३६ बर्ष पनि पुरा भईसकेकाे थियाे ।